Grade Famous "inkumbulo Yakovlev". Pear ngoba emaphakathi neRussia
Pear ekuqaleni kuka ekwindla izinhlobonhlobo "Memory Yakovlev" ubhekwa kakhulu ingashintshwa ukuze sezulu of eRussia emaphakathi. Lokhu izitshalo oncomekayo horticultural isakazeke eCentral Isifunda kanye iVolga esifundeni. "Inkumbulo Yakovlev" - ipheya, okuyinto ehlukile hardiness ebusika kanye ukumelana uqweqwe, ngokushesha futhi ezikhulayo ngentshiseko, lafinyelela naphakathi, futhi emihle izithelo. Letha isivuno esihle lesi isihlahla izithelo iqala eneminyaka engu-3-4 iminyaka. Minyaka yonke, ukwanda isivuno, isibonelo, isitshalo eneminyaka eyisikhombisa angaqoqqa 20 kg izithelo esiphundu futhi unempilo. Isimo esiyinhloko fruiting obuningi futhi ukunambitheka elimangalisayo amagonandoda - njalo futhi kuniselwa eyanele esihlahleni.
"Inkumbulo Yakovlev": ipheya ingadi yakho. incazelo ezihlukahlukene
Lokhu ezihlukahlukene Sekuqaliswe ngenxa umsebenzi ehlelekile izisebenzi kanye GNU VNIIG SPR kubo. IV Michurin futhi MichGAU - P. N. Yakovleva, Ya S. Nesterova, S. P. Yakovleva futhi R. M. Korshikovoy.. Ukuze entsha izithelo zomuthi abangu sawela ezihlukahlukene French "Olivier de Serres" futhi uhlobo "isihloko". Pear "Memory Yakovlev" Incazelo okulandelayo: izithelo zomuthi usayizi amancane oyindilinga, umqhele obukhulu. Amagatsha main zikhule cishe ngesikhathi engeli ilungelo isiqu, ukudlula kwesikhathi akhiwa kolchatki (iDemo ohlangothini amahlumela ukuthi babe izinso beya). Amagxolo grey, ngokuvamile zibe maholoholo. "Inkumbulo Yakovlev" - ipheya obunesikhumba green akushiyela imiphetho serrated futhi eside stem isilinganiso. Amahlumela kukhona brown ukukhanya ngombala, woza ngameva. Izinso abe ukuma oyindilinga kanye surface bushelelezi. Lokhu izithelo zomuthi probudimostyu okusezingeni eliphezulu kwezinso ezahlukene. Izimbali isihlahla izimbali ezimhlophe, siphethe amacembe ehlukile futhi emaphethelweni abushelelezi.
"Inkumbulo Yakovlev" - ipheya ukunambitheka emangalisayo
Pear Luyaqhakaza ngoMeyi, ngisho nangaphambi avele amaqabunga. Izithelo yokuvuthwa kwenzeka ekupheleni ehlobo noma kwentwasahlobo. Cabanga cishe 120-140 g izithelo futhi ube usayizi isilinganiso nomumo babanjwa noma tupogrushevidnymi. Ngokuqondene umbala, kwaba ikakhulukazi izithelo umbala ophuzi noma legolide, orange-red "yilanga" zingabonakala iyiphi ingxenye umbungu. Khulisa isithelo eside Isiqu lwalugobile, ukuze basuke wayekholelwa ngokuqinile emagatsheni. Pear izinhlobo "inkumbulo Yakovlev" has a izithelo namanzi kakhulu futhi elimnandi nge ukunambitheka ngokulambisa lizwakale okumuncu ne-tart ngaphandle express. Inyama yomhlatshelo ipheya - ukhilimu, kusuka imbewu isidleke granulation.
"Inkumbulo Yakovlev" - ipheya, aqukethe ezihlukahlukene amavithamini kanye ukulandelela izakhi. It ingenziwa sezimoto okumnandi, compotes, sezimoto kanye neminye Amalungiselelo ebusika. izithelo kanye zigcinwa esiqandisini - kusukela ngo-September kuya ku-December ka. Uma ufuna ukugqoka yakho cottage zasehlobo ezinhle isihlahla, ayeke okukhethayo grade "inkumbulo Yakovlev". Pear has eziningi eziwusizo: kuba ukubukeka ekuseni, kuyinto icwecwe futhi amelana frost. Yini embi ngalo kuphela yalesi sihlahla wukuthi izithelo angase abe misaligned ne fruiting obuningi.
Heuchera: zokutshala nokunakekela
Indlela ukutshala amazambane, ukuqoqa inala yesivuno
Imihlobiso for engadini ngezandla zakhe
Izimbali "Splashes champagne" - umhlobiso omuhle engadini yakho
Amagilebhisi Elegant: incazelo grade, nezinhlamvu, izici kulinywe. Indlela ukutshala amagilebhisi entwasahlobo
Monarch Amagilebhisi - omunye nzalo okumnandi kakhulu yesimanje
Corsets Wamathambo - i ekahle usizo emgogodleni.
Ikhanda nentamo massage
Bheka & Ingabe e Gelendzhik
Yinqwaba Intulo ocingweni. Ukusetha ucingo ku isikulufa yinqwaba
Lobaev sniper sokuzingela: Ukucaciswa, ukubuyekezwa, intengo, ukucinga indikimba yendaba
Umnyaka umhlalaphansi eRussia phakathi kwamadoda nabesifazane ukuzibonakalisa ezahlukene
Isivumelwano imisebenzi ngokuhlanganyela nokubambisana: inkontileka isampula
Ubuntu isici. nobuntu nomqondo ungubani kanye nezici zayo isici.
Izicelo soundproofing esibukweni. Noise izithiyo on imigwaqo
I izakhiwo esiyingqayizivele ngokomzimba futhi amakhemikhali amanzi
Umuthi 'Kataria ": yokusetshenziswa futhi impendulo